WAR-SAXAFADEED Wasiirka Gargaarka oo ka warbixiyey Xaaladda Deegaannada uu ku fatahay wabiga Jubba | Somalisan.com
Home Afsomali WAR-SAXAFADEED Wasiirka Gargaarka oo ka warbixiyey Xaaladda Deegaannada uu ku fatahay wabiga...
WAR-SAXAFADEED Wasiirka Gargaarka oo ka warbixiyey Xaaladda Deegaannada uu ku fatahay wabiga Jubba
Wasiirka Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka ee Xukuumadda Federaalka
Soomaaliya Mudane Xamse Siciid Xamse ayaa ka warbixiyey xaaladda binu aadantinimo ee aadka u culus oo la soo gudboonaatay magaalada Baardheere ee Gobolka Gedo, kaddib markii uu ku fatahay wabiga Jubba.
“Talaabada ugu muhiimsan wakhtigan waa in aan ka daad-gureynaa dadka ku xaniban gudaha xaafadaha ee wabigu ku soo fatahay, iyada oo aan u rarayno qeybta magaalada ee kore.
Sidoo kale waxaa muhiim ah in aan qorshe u samayno dadka beeralayda ah ee dalagoodii iyo agabkoodii wax soosaar ay galaafteen biyuhu, si aan uga hortagno xaalad binu aadantinimo oo ka dhalatay fatahaadahan maadaama nolasha reer
Baardheere ay ku tiirsan tahay beeraha.”
Wasiir Xamse Siciid ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed in ay u istaagaan sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen gurmadka deg-deg ah ee loo fidinayo deegaannada ay fatahaaduhu ku dhufteen, iyada oo la xoojinayo wacyi gelinta ku aaddan halista fatahaadaha iyo daadaka ee la filanayo, maadaama lagu guda jiro
xilli roobaadkii Guga.
Previous articleOxfam raises alarm over Somali remittance lifeline
Next articleUgandan Peacekeeper VS COVID-19 In Somalia
Nigerian man, three other illegal African migrants convicted for rape and murder of 16-year-old
Dowlada hoose ee xamar oo daqli ururin hor leh ka bilaabeysa airporka
Somalisan News - November 22, 2020
Wasiir Goodax oo diiday in dowladu shahaadadeeda aqoonsato hey.ad waxbarasho oo aan u hogaasamin...